Elatra anjely: inona ny hevitr'izy ireo sy ny sary maneho ny elatra | Famoronana an-tserasera
Ny iray amin'ireo sary tsara tarehy indrindra izay saika ny olona rehetra amin'ny fotoana sasany mijery ny fiainany na manana zavatra mifandraika amin'izany dia ny elatry ny anjely. Na amin'ny alàlan'ny hatsaran-tarehy, tatoazy, afisy na sary tsotra, io fisolo tena io dia manome antsika tsy filaminana sy fahadiovana ihany, fa koa fanantenana sy faniriana "handositra".
Ny elatry ny anjely dia iray amin'ireo singa hita maso indrindra amin'ny mpamorona maro, ary angamba ny sarisary voalohany nataony. Fa inona no dikan'ireo? Inona no tian'izy ireo holazaina? Izany rehetra izany sy ny maro hafa no hodinihintsika manaraka.
1 Ny fanehoana ny elatry ny anjely
2 Ny dikan'ny elatry ny anjely
3 Mora ve ny manintona elatra?
4 Sary elatra anjely
Ny fanehoana ny elatry ny anjely
Ny fieritreretana elatra anjely dia azo antoka fa hahatonga ny sainao hamorona sary maranitra azy ireo. Araka ny tsirairay avy, sy ny toe-javatra misy azy ireo dia mahazatra ny maka sary an-tsaina azy ireo misokatra, mihidy, elatra tokana, mainty na fotsy toy ny ivoara. Miankina amin'ny tonony izany, afaka manondro volo mainty izy ireo, na lavo, na malahelo; na olon'ny hazavana, manondro ny lafy tsara, ny tsara, ny fanantenana ary ny finoana.
Ireo elatra ireo dia mifandraika amin'ny anjely mpiambina izay lazain'ny olona tsirairay avy, amin'ny fomba izay hiresahanay ny fampisehoana an'io torolàlana izay anananao avy amin'ny olona iray izay miahy anao ary manandrana mitarika ny dianao mba ny fiainanao no mety indrindra. Raha ny marina dia misy firesahana an'io "anjely" io ao amin'ny Baiboly ihany. Izy io dia momba ny fotoana niresahan'Andriamanitra tamin'i Moizy ary nilazany fa handefa anjely hialoha azy hiaro azy izy ary hanampy azy ho tonga amin'ny toerana izay namboarin'Andriamanitra tenany. Noho izany, afaka miteny isika fa tsy mitombina ny mieritreritra toy izany momba ny elatry ny anjely.
Na dia ny zavatra mahazatra aza dia aseho amin'ny pendants, kavina, na amin'ny peratra aza, ny marina dia betsaka ihany koa ireo sahy manisy tombokavatsa elatra, na misarika azy ireo. Ary ilay izy, na dia toa mora aza, ny mamorona elatry ny anjely izay toa tena velona, ​​izay toa olombelona sy any an-danitra miaraka amin'izay, dia tsy mora. Izany no mahatonga ny mpamorona maro hanandrana hanao azy ireo, samy amin'ny fombany avy, saingy vitsy no mahatratra ny vokatra irina indrindra, dia ny manome fanantenana ary miaraka amin'izay mahavariana, mieritreritra fa tsy mety ho zavaboary olombelona izy ireo.
Andao handeha lavitra kokoa, tianao ho fantatra ve ny dikan'izy ireo?
Ny dikan'ny elatry ny anjely
Ny elatry ny anjely dia misy heviny maro, fa izy rehetra ireo dia mifandray akaiky amin'ny fahadiovana, tanjaka, fahalavorariana ... Fanehoana ny mpitari-dalana, ny te hiaro ilay olon-kafa ary manome azy ny fankasitrahan'ny anjely mpiambina eo anilany mba hiaro azy sy ny At ny fotoana anaovana azy ho mpitari-dalana amin'ny andavanandronao.
Na izany aza, tsy io irery no dikany. Misy koa ny resaka a fifandraisana eo amin'ny tany sy ny lanitra, indrindra rehefa aseho tsirairay ilay elatra, satria mahatonga an'io olona io ho olona any an-danitra sy olombelona, ​​satria elatra iray ihany no itehirizany. Amin'ny lafiny iray, manana fahalalahana omen'ny elatra azy izy; amin'ny lafiny iray, ny tanjaka hiainana.
Tsy misy isalasalana fa ny elatry ny elatra dia ny fahafahan'ny fahalalahana, ny fahaizana manidina sy miroso amin'ny traikefa nahafinaritra, mba hahatratrarana tanjona izay tsy maintsy iadivana (aza adino fa izay manana elatra dia tsy maintsy mandray finoana hianarana manidina ary tsy mahomby foana izy ireo amin'ny voalohany).
Tokony ho ao an-tsaina fa ny elatra izay mavesatra matetika dia ireo izay mifandraika amin'ny zavaboary majika, toy ny dragona, anjely, demonia, voafatotra, matoatoa ... izay manome dikany paranormal kokoa, toy ny hoe fiezahana hamahana amin'ny majika ataon'ireo zavaboary angano ireo mba hiatrehana ireo olana samihafa ananan'ny olona iray amin'ny fiainana. Saingy, amin'ny raharahan'ny anjely, ny hevitra mahazatra indrindra amin'ireo dia ny fanomezana fiarovana ny olona mitondra azy, ary koa ny fisarihana io "olona manokana" io hanampy azy.
Mora ve ny manintona elatra?
Raha mpamorona ianao, dia azo antoka fa tsy manana olana firy ny fanaovana elatra, satria amin'izao fotoana izao dia misy endrika mora atao. Ary arakaraka ny fahaizanao no ahafahanao mamorona endrika hafa. Na izany aza, elatra anjely no sasany amin'ireo sarotra tratrarina indrindra. Indrindra mba hahatratrarana ny vokatra tadiavina, izay ny zava-misy fa toa mivoaka avy ao anaty taratasy izy ireo na ny solosaina.
Tsy dia mora izany, ary vitsy dia vitsy ny matihanina manao izany. Na izany aza, tsy azo atao koa izany raha fantatrao ny sasany amin'ny tetika misy hahatratrarana izany vokatra izany. Ohatra:
Ny fampiasana aloka. Ny aloka dia iray amin'ireo teknika fampiasa indrindra, ahafahana manome azy ireo boky. Fa koa ny halalin'ny tsipika, toa misongadina na koa mamorona ilay fiheverana fa mihetsika izy ireo.
Ny haingon-tsary Ny fampiasana karazana taratasy samy hafa dia afaka miasa hahasoa anao mba hahatonga ny elatry ny anjely ho tonga lafatra kokoa.
Kapoka malefaka atambatra amin'ireo matanjaka kokoa. Manome zava-misy tena lehibe kokoa amin'ny sary ianao, mampifantoka ny saina amin'ny ampahany samihafa izay, miaraka amin'ny etsy ambony, dia hamorona ny vokatra mitambatra.
Sary elatra anjely
Mba hamaranana dia avelanay eto ambany ny fanangonana elatry ny anjely izay afaka manome anao hevitra hamoronana endrika anao manokana hampiasa azy ireo, na amin'ny sora-baventy, logo, magazine ... Ka afaka mamorona portfolio misy iray amin'ireo laza malaza indrindra ianao famolavolana ary miaraka amin'izay koa sarotra kokoa ahazoana fotoana misy vokany "wow".
Manoro hevitra an'izany izahay aza miorina amin'ny famolavolana iray fotsiny ny tenanao (na amin'ny maromaro) fa ianao kosa mamorona ny zavaboarinao manokana ka manome io fikitika manokana io. Izay no mahasamihafa anao amin'ny mpamorona hafa (na dia samy hafa be aza izany amin'ny elatry ny anjely hitanao matetika). Tsy fantatrao mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Elatra anjely